UKUGQITYWA KWEKHONKRITHI YOKUHAMBA KWENDLELA (IINTLOBO EZIDUMILEYO KUNYE NOYILO) - UKUPHUCULWA KWEKHAYA
Eyona Ukuphuculwa Kwekhaya Ukugqitywa kweKhonkrithi yokuHamba kweNdlela (Iintlobo eziDumileyo kunye noYilo)
Ukugqitywa kweKhonkrithi yokuHamba kweNdlela (Iintlobo eziDumileyo kunye noYilo)
Wamkelekile kwisikhokelo sethu kwisiphatho sekhonkrithi sokugqitywa kweendlela kubandakanya ezona zinto zidumileyo zoyilo kunye nemibono yekhaya lakho. Ukuqhutywa kweekhonkrithi kuyamangalisa ngezizathu ezininzi. Umzekelo, zihlala zizinzile, kulula ukuzigcina, kwaye zihlala zihlala ixesha elide.
Banokuba bahle nabo, nangona. Kwesi sikhokelo, siza kujonga kuyo yonke into oyifunayo malunga nokugqitywa kwekhonkrithi yokuqhuba ukuze uqiniseke ukuba indlela oqhuba ngayo ime ngaphandle. Bona ngokwahlukileyo iintlobo zeendlela zokuqhuba kweli phepha.
iingoma zokuya ezantsi enqanaweni ukuya
Ikhonkrithi yeNdlela yokuGqibela yokuQhuba
Umtshayelo ugqibe ikhonkrithi yendlela
Ukugqitywa kweKhonkrithi egudileyo
Ukugqitywa kweKhonkrithi yokuGqitywa kweKhonkrithi
Indlela eKhonkrithi yokuGcina
Pebble Gqiba ikhonkrithi yokuhamba
Ikhonkrithi yokuHamba ngokuBonisa ukuGqitywa kokuGqityiwe
Imfunxa Qedela indlela yokuhamba
Ityuwa igqiba ikhonkrithi yendlela
Ukugqitywa kweKhonkrithi yanamhlanje
Xa kuziwa kugqityiwe ukuqhuba kwekhonkrithi, awusileli kukhetho. Abanini bamakhaya banethuba lokulinganisa indlela yabo yekhonkrithi kwisikimu sabo sokuyila kunye noyilo ngokukhetha kwiintlobo ezahlukeneyo zokugqitywa. Ezi zezinye zezona zinto zixhaphakileyo zokugqiba ikhonkrithi.
Ikhonkrithi egqitywe ngumtshakazi inegama elichazayo. Sisiphumo esifunyanwa ngokusebenzisa umtshayelo kwikhonkrithi njengoko isoma.
Ngenxa yoko, ikhonkrithi ayinanto egudileyo, nkqu nomphezulu. Endaweni yoko, umtshayelo ushiya i-indents kwikhonkrithi yokugqitywa kombhalo.
Olu hlobo lokugqitywa lungaphezulu kwexabiso lobuhle ngokunjalo. Ngekhonkrithi yokugqiba umtshayelo, ikhonkrithi inokugqitywa okunganyangekiyo.
Ukufezekisa le mpembelelo ngokuzeleyo, kungcono ukufaka i-grooves ejikelezayo kulwalathiso oluqhelekileyo lokugcwala kwindlela yokuhamba. Oku kuyakwenza olona xhathiso.
Ukuba ufuna ukugcina izinto zilula, akudingeki ukuba ungeze iphethini kwikhonkrithi yakho nonke. Ukugqitywa kokungathathi hlangothi ngokubanzi kwindlela yokuhamba kwekhonkrithi kukukhetha ukugqitywa kwekhonkrithi egudileyo.
Ngale ndlela, ikhonkrithi inomphezulu ogudileyo kuphela ngaphezulu, nangona ithatha ubuchule bokugqibezela obu buchule bokuyila.
Ezona zinto ziphantsi kuphela kwesi sigqibelo kukuba aziboneleli ngeempawu ezifanayo njengokumelana nesiliphu njengokugqitywa okubhaliweyo njengokugqitywa komtshayelo. Okwangoku, isiphumo sicocekile, esiyi-driveway yanamhlanje eya kukugcina iminyaka ezayo. Bona Okuninzi izimvo zangoku zokuqhuba Apha.
Ikhonkrithi enesitampu inomdla kuba ayisiyilo eyodwa kuphela. Ngokwenyani unokukhetha okuninzi ngaphakathi kudidi lweendlela ezigqityiweyo zekhonkrithi.
Emva kwayo yonke loo nto, ukunyathela ikhonkrithi kubhekisa kwinkqubo eqhelekileyo yendlela iipateni ezibhalwe ngayo kwikhonkrithi, hayi iindlela ezikhoyo.
Xa kuziwa ekukhetheni iphethini ethile, ukhetho lwakho alunamda. Nangona kunjalo, ukhetho oluqhelekileyo lubandakanya ukunyathela ikhonkrithi kwiimilo okanye ukuxelisa ukubonakala kwesinye isixhobo njengezitena. Njengokugqitywa komtshayelo, oku kunokunceda ubungqina bemozulu kwindlela yakho yokuqhuba kwaye uyenze inganyangeki kwimvula.
Phalazwa njengoko injalo, abantu abaninzi bayayiqonda ikhonkrithi kwimbonakalo yayo engwevu. Kubanini bamakhaya, oku kungaphakamisa inkxalabo yokuba, ukuya kuthi ga ngokombala, ikhonkrithi inokuba lukhetho lwe-drab. Oku kukuchasene nenyaniso! Unokwenza ikhonkrithi yakho yokuqhuba phantse nayiphi na imibala oyifunayo.
Kungenxa yokuba unokhetho lokungcolisa indlela yakho yekhonkrithi. Ukugcina ikhonkrithi yindlela eqinisekileyo yomlilo yokufumana umbala omtsha nonomdla kwaye kuba ingekho kumphezulu wekhonkrithi kuphela, iya kuhlala ixesha elide ngaphandle kokubuna okanye ukutshintsha.
Unokudibanisa nezinye izinto ngekhonkrithi ukwenza ukugqiba okungafaniyo. Enye indlela ethandwayo yokwenza oku kukusebenzisa ilitye lokugqibela kwindlela ekhonkrithi.
Kule ndlela, iingqalutye zixutywe nekhonkrithi, ngoko ke zitshixelwa endaweni yakuba iiseti zekhonkrithi. Oku kunesiphumo esinomdla sokongeza ubunzulu kwinkangeleko ngokutshintsha ubume bendlela yokuhamba ngokupheleleyo.
Iinwele ezikhuthazayo zelokhwe engenamtya
Ngapha koko, eli lelinye icala apho ukongeza ubume bunokongeza uncedo ekudaleni umhlaba ongathambekiyo xa umanzi. Oku kuluncedo ngakumbi kwindlela yokuqhuba ebonakaliswe kwizinto ngokungaguquguqukiyo.
Ukugqitywa kokugqitywa kwamanqaku kunxulumene nokugqitywa kweengqalutye. Emveni kwakho konke, kutyhilwa indlela yokuhamba iyonke Kugqityiwe ngumxholo wokongeza izinto ezihlanganisiweyo kwikhonkrithi kwaye uyiveze kamva.
Ngokwenza oku, ikhonkrithi iphela ngokugqitywa okubhaliweyo okuvela kumgangatho ogqityiweyo wokugqitywa kwekhonkrithi.
Umdibaniso ngokwawo uyahluka ngokuxhomekeka kwinkangeleko oya kuyo kodwa uninzi lweendlela zekhonkrithi zenziwe ngokudibeneyo njengelitye elityumkileyo, igrabile, isanti, nokunye okuninzi. Lilonke, ungasebenzisa izinto ezihlanganisiweyo ezenzeka ngokwendalo, ezenziwe ngabantu, okanye izinto eziphinda zenziwe kwakhona.
Ikhonkrithi egqityiweyo yesiponji lolunye ukhetho xa kufikwa kwikhonkrithi enomhlaba ogqityiweyo. Inkqubo yokwenza isiponji ifuna ukuthulula ikhonkrithi kwaye uyilinde ibe nzima. Bahlamba ikhonkrithi ngamanzi kunye nokufaka isiponji ukwenza isiphumo esifunekayo.
Inkqubo ngokwayo ichitha ixesha kwaye ihlala isetyenziswa kwiindawo ezinokuhonjiswa ezinje ngokufakwa ngaphakathi, ii-accents kunye nokujamelana neephuli.
Oku kuthetha ukuba ayikhange ibonakale intle kuphela kwaye ibandakanyeka ngokubonakalayo kodwa iya kunceda ukongeza inqanaba eliphakamileyo lokumelana nesiliphu kwindlela eya kuthi incede ukwenza ukuba indlela ekhuselekileyo ikhuseleke kwimozulu enethayo.
Ubungakanani be-14 yeebhendi zomtshato
Ityuwa igqibe iindlela zekhonkrithi ezinepateni engaqhelekanga enokwenza imbonakalo yamachokoza. Olu gqibo oluthile lufumana igama lalo kwinkqubo eya ekudalweni kwesiphumo.
Ukwenza ityuwa yokugqiba ikhonkrithi yokuhamba, ityiwa yetyiwa yongezwa kusetyenziswa iiroller kwikhonkrithi emva kokuba ibekiwe kodwa ngaphambi kokuba ibekwe. Oku kudala ukugqitywa kohlobo oluthile esixoxe ngalo mzuzwana odlulileyo.
Enye into ebabazekayo malunga noku kugqitywa kukuba ikwenzele ikhonkrithi ngokunjalo. Oku kuyenza ibe lolunye ukhetho olukhulu kwindlela yokuma kwesamente ephatha imozulu kakuhle. Ngapha koko, ukugqitywa kwetyuwa kuthandwa ngakumbi kumachibi okumelana neslip.
Zininzi izinto ezigqityiweyo zekhonkrithi phaya ezinokubonisa ukongeza okumangalisayo ekhayeni lakho. Ngelixa sijonge kakhulu kwezona zidume kakhulu, kukho ezinye iindlela apha ngaphandle ukongeza ubucukubhede banamhlanje kwimbonakalo yelizwe lakho.
Olunye ukhetho onalo kukugqitywa kwekhonkrithi ehlanjwe ngesanti. Oku kuyafana nokugqitywa komndilili ocacileyo kwaye kuya kunika indlela yakho indlela ecekeceke encedayo ekwenzeni ukuba indlela yakho inyibilike ngakumbi. Unokudlala ngokujikeleza ukongeza ii-motifs okanye uyilo kwikhonkrithi.
Ekugqibeleni, kukho ukugqithisa kwezinto onokukhetha kuzo ukuhambelana nesimbo sakho xa uthe wagqiba ekubeni ugqibe indlela entsha yekhonkrithi.
Ukufumana umxholo onxulumene noko jonga inqaku lethu ngokuthelekisa ii-pavers vs ikhonkrithi yokuhamba ngeendlela .
Kuthatha ixesha elingakanani ukutshintsha igama lakho eCalifornia
umnyango wefama umnyango wefriji
iilokhwe zomtshato ezinee-aksenti ezimfusa
Unyaka wesibini umbono wesipho
izibini ezidumileyo kuluhlu lwembali